Football Khabar » मेस्सीले प्रि–सिजनका कुन–कुन खेल गुमाउँछन् ?
मेस्सीले प्रि–सिजनका कुन–कुन खेल गुमाउँछन् ?
एजेन्सी, साउन २
स्पेनिस बार्सिलोनाका अधिकांश खेलाडी बिदा सकाएर क्लब फर्किसके पनि केही प्रमुख खेलाडी पनि अझै पनि बिदामै रमाइरहेका छन् । जसमा कप्तान लिओनल मेस्सी, लुइस स्वारेजसहितका खेलाडी अझै पनि बार्सिलोना पुगेका छैनन् ।
यतिबेला बार्सिलोनामा अधिकांश खेलाडी प्रशिक्षणमा भए पनि कप्तान मेस्सी पनि आइपुगेका छैनन् । उनी आफ्नो परिवारसँग घुमघाम गरिरहेका छन् । बार्सिलोनाले आजको ६ दिनपछि प्रि–सिजनअन्तर्गतको पहिलो खेल खेल्दैछ । उसले नयाँ सिजनअघि जम्मा ५ खेल खेल्नेछ ।
तर, मेस्सी भने प्रि–सिजनका सबै खेलमा सहभागी नहुने भएका छन् । उनले पाँचमध्ये तीन वा दुई खेल मात्रै खेल्नेछन् । क्लब बार्सिलोनाले मेस्सी जुलाईको अन्तिमसम्ममा बार्सिलोना फर्किने जनाएको छ ।
यसो हुँदा मेस्सीले प्रि–सिजनको तेस्रो खेलबाट खेल्न सक्नेछन् । सो खेल अगस्ट ४ मा इंग्लिस क्लब आर्सनलसँग हुनेछ ।
बार्सिलोनाको टोली अर्को साता जापान भ्रमणमा निस्कँदैछ । त्यहाँ बार्सिलोनाले राकुटेन कपअन्तर्गत मैत्रीपूर्ण खेल इंग्लिस क्लब चेल्सी र जापानी क्लब भिसाल कोबेसँग खेल्ने तालिका छ ।
बार्सिलोनाका प्रि–सिजन टुरका खेल :
बार्सिलोना भर्सेस चेल्सी (जुलाई २३)
भिसाल कोबे भर्सेस बार्सिलोना (जुलाई २७)
बार्सिलोना भर्सेस आर्सनल (अगस्ट ४)
नापोली भर्सेस बार्सिलोना (अगस्ट ७)
बार्सिलोना भर्सेस नापोली (अगस्ट १०)
बार्सिलोनाले नयाँ सिजन २०१९–२० को पहिलो पहिलो खेल अगस्ट १८ मा ला लिगामा खेल्दैछ । उसले लिगको पहिलो खेल एथ्लेटिको बिल्बाओसँग अवे मैदानमा खेल्दैछ ।
प्रकाशित मिति २ श्रावण २०७६, बिहीबार १५:०३